Yenza imigca yentsontelo ngeArcGIS-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Velisa imisele ne ArcGIS
ArcGIS-ESRIcadastreOkufumanekaGPS / IzixhoboTopography
Ukwenza uphando lwe-cadastral ngesikhululo esipheleleyo, ngaphandle kokuchaneka kweemilimitha, kunokuba luncedo kwezinye iinjongo, kuba sinokuphakama kwenqaku ngalinye. Masibone kule meko, indlela yokuvelisa imigca yentsontelo, esele siyibonile nayo AutoDesk Civil 3Dnge Bentley Geopak y GIS asibonise, ukwenzela iinjongo zemfundo, kulo mzekelo siza kwenza ngeArgGIS.
1. Idatha yeCAD
Kulo msebenzi, ndineefayile zophando kwi-dgn, enye yosuku ngalunye lomsebenzi. Ukungenisa ngaphandle kulula njengoku:
Iifayile ze-dgn zikhethiweyo, kunye ne-voila, kuzo zonke. Jonga indlela ezibahle ngayo, unokubona iintsuku amakhwenkwe asebenza ngazo, xa besenza iinzame kwaye nini ba bhenqa.
Ngaphezulu kokuthakazelisa, ungabona apho bathathe khona amanqaku, kule meko phantse kuphela kutshintsho lwezifundo, ukuthatha imida kunye neebhodlo ngeteyiphu yokulinganisa. Kuyasebenza ukuxhasa indlela yophando yexesha lokungahambelani kunye nemilinganiselo yamaxwebhu okanye olunye uphando. Unokubona apho bazibeka khona izixhobo ukujonga emva.
2.Faka amanqaku kwi-geodatabase
Ukuphatha ngcono, ndiya kufaka amanqaku kwindawo yedatha. Ukwenza oku, sithatha ukuba sele yenziwe ngeArcCatalog kwaye ichaze udidi lweNqaku.
Inkalo yesigaba kwi-geodatabase
3 Yenza imodeli yedijithali
Amanqanaba amanyathelo angamanyelwa, kodwa ngenjongo yokuqonda ukusetyenziswa kwe-3D Analyst, siya kubona kule ndlela.
Izixhobo zokuhlalutya ze-3D
Ngaloo nto sichaze igama lomzekelo, siya kufaka amanqaku:
Yongeza inkalo yesigaba kumhlaba
Ngoku masenze i-TIN
Uyabona ukuba ngokugqithiseleyo ukuba akukho manqaku aneleyo, ukuxathunyiswa kwetatu kuhlala kuhlwempuzekileyo, kodwa apho izitalato zihlala khona, zihlala zihleli.
Ndiqaphele kwakhona ukuba ngenxa yobumsulwa babo, kolu phakanyiso amakhwenkwe enze impazamo ngokungalondolozi ilifti xa kutshintshwa izixhobo. Impazamo enokugcinwa, ngokudibanisa amanqaku akufutshane kodwa ukubonwa kunokubakho ngexesha lokwenza ukulungiswa Cebisa ukuba kumanqaku amabini okuqala asebenzise ulungelelwaniso lokuphakama olunikezwe yi-GPS kunye nomgama owaneleyo ukunciphisa impazamo yokujikeleza ngenxa yokungachaneki kweGPS.
4 Ukuvelisa iirveve zamanqanaba
Njalo kwi-3D Analyst
Lapha sikhetha i-TIN esanda kudala, ugcino olujoliswe kuyo kunye nekhefu phakathi kwemigca yecala (phakathi kwabanye) iipirouettes owandisindisa ngenxa yezizathu zendawo).
Amanyathelo aphezulu xa kuthelekiswa ne-GIS ye-Manifold, kodwa ukhetho lunamandla kakhulu.
5 Yenza imephu yomthamo.
Yintoni eza kukunika ukusetyenziswa kwalo, ukuze kuvele okulungileyo linokusetyenziswa ukuyila iinkqubo umjelo, ngokuba le nto akusekho nje mvukelo parcelario, kodwa uphando apho unako ukusebenza iinkangeleko kwizitrato nje ezimbalwa amanyathelo .
I-CAD: Thumela kwakhona, phambili
Ndicinga ukuba kuluhle kakhulu, kodwa ungandixelela ngenguqulo yintoni ongayenza ngayo imigca.
Ndicinga ukuba ezi zixhumanisi zinokukunceda:
Eyokuqala ihlawula, kodwa ndicinga ukuba indlela efanelekileyo yokufunda kukutyalombela kwikhondo elungileyo.
Ukuba ulwazi elungileyo, nje iinkcukacha I ezisandul 10 ArcGIS ndisenayo iingxaki ngezinto ezininzi, ukuba undixelele indlela ukuqala ngokoqobo ukusuka ekuqaleni ethile tirorial ukuncoma.
Ngaphambi kokuba usebenze nge-arcview 3.2 kwaye uzive uqobo. Ndiyathemba ukuba unokunceda
UFranz Leonardo uthi:
Ndiyabonga kakhulu ngolwazi, ukusuka kwi-TIN unokwenza okuninzi, kwaye apha uchaza kakuhle indlela yokwenza umgca wendlela.
Khangela imemori yangaphakathi, kwaye ujonge kwimimiselo, ukuba uqondisa kwimemori yangaphakathi.
Kwakhona khangela ngexesha lungabanjwa, ukuba mfutshane kakhulu okanye ukuba nocwangciso isetelwe eyenza ezinye iinzame wenza post-processing ngexesha lenene.
Ndiyabulela kubo eninzi uncedo, ndoba ndingophathiswe Magellan GPS mobile Mapper 6 v2.1 kodwa musa ukuqonda isizathu sokuba ufumane into endiyifunayo imemori ngokwaneleyo ukuze postprocessing nangokusebenzayo kwimemori bangaphandle alinanto oko kufanele
AmaGentlemen angenza i-tuto ngolwazi olungakumbi nceda.
Iipolylines zidityaniswe nomyalelo wePedithi, kukhetho lokudityaniswa okuninzi. Into eyenzekayo kukuba kufuneka ibe ziipolylines, ukuba une-smartline type curves awuzukwazi.
Hi I nengxaki wokujoyina iibhloko eziliqela Eekhonto unako umntu nindincede, ukucacisa kufuneka bamnqule kunye nezinye polylines polylines ukuba ngenye yezindlela? mbulela
Excellent, ndifuna ukwazi ukuba ndinga ayudar.Necesito ndiyazi ukuba ukwenza njani amacici kunye rodalizacion unmapa kunye ArcGIS, ukuba pudiers thumela PAOs ukuba jalfremar_59@yahoo.es uthi:
Oku kulungile ukwazi ukuba kukho abantu abanolwazi kwaye abanqikazi ukuxhasa abanye. Ukudalwa okugqwesileyo kwemigca ye-contour ne-ArcGis.
Unokundinceda ngokubonisa ukuba yiyiphi inyathelo yokwenza imephu ye-slope kunye nokuma kwehlathi. Imeyili yam jalfremar_59@yahoo.es kunye negama linguJoseph Alfredo Martínez, eHonduras.
uJohn sanmartín uthi:
Ndiyabulela ngenxa yegalelo lomthombo, ulwazi lwakho luye lwamkhonza ngexesha elifanelekileyo
Albaro Vine uthi:
le nkcazo kakuhle kakhulu ndiya kuxabisa kakhulu ukuba bafundise ukususela ekuqaleni ukuba njani ukuvelisa imigca yeendlela
Iyafumaneka simahla-itemplate yokuguqula ulungelelwaniso lwe-UTM ukuya kwiJografi